अस्ट्रेलिया जाने सपना त्यागेर ‘धागोको चुरा’ सम्हाल्दै १९ वर्षीया वर्षा ! - समृद्ध नेपाल
अस्ट्रेलिया जाने सपना त्यागेर ‘धागोको चुरा’ सम्हाल्दै १९ वर्षीया वर्षा !
अस्ट्रेलिया जाने सपना त्यागेर ‘धागोको चुरा’ सम्हाल्दै १९ वर्षीया वर्षादुई वर्षअघि प्लस-टु सकेपछि वर्षा मानन्धर फुर्सदमा थिइन्। स्नातक गर्न अस्ट्रेलिया जाने सोच थियो। त्यसकै तयारीमा लागिन्। तर जब उनले आमाबुवासँग मिलेर सानो व्यवसाय थालिन्, जीवनले अर्कै मोड लियो।
वर्षाले आमाबुवाको सहयोगमा ‘धागोको चुरा’ सुरू गरिन्। धागोको चुरामा विभिन्न डिजाइनका चुरा पाइन्छ। मुख्यतयाः यसले ग्राहकको डिजाइनअनुसार काँचको चुरालाई धागोले बेरेर बुट्टा भरिदिन्छ।
वर्षाले यो काम प्लस-टु परीक्षा सकेर मिलेको फुर्सदमा सुरू गरेकी थिइन्।घर बस्दा आफैंले बनाउन सक्ने कुराहरू सिक्न थालेँ। त्यही बेला ममीको पुरानो चुरामा धागो बेर्दै बुट्टा बनाउन थालेँ,’ १९ वर्षीया वर्षाले भनिन्, ‘समय बिताउन त्यसो गरेकी थिएँ तर राम्रो बन्यो।’
वर्षालाई त्यसरी धागोको चुरा बनाउन आमा सुशीला र बुवा विमेशले सघाए। सुशीला जनप्रभात माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक छन्। विमेशले भने यतिबेला कामबाट केही समयका लागि ‘ब्रेक’ लिएका छन्।
उनीहरूलाई पुराना काँचको चुरामा धागोले बेरेर नयाँ डिजाइनमा चुरा बनाउने आइडिया मनपर्‍यो। त्यसपछि नै यसलाई व्यवसायिक हिसाबले अघि बढाउने सोचेको सुशीला बताउँछिन्।
‘नेपालमा प्रायः धागोको चुरा व्यवसायी देखेका थिएनौं। यो आइडिया बजारमा बिक्ने सोचले व्यवसायिक रूपमा अघि बढायौं,’ सुशीलले भनिन्, ‘नयाँ डिजाइनको भएर होला अहिलेसम्म ग्राहकहरूले मन पराइदिनुभएको छ। सकारात्मक र उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं।’
धागोको चुरा बनाउन चाहिने सामग्रीको जोहो र डेलिभरीको पाटो सुशीलाले नै सम्हालेकी छिन्। यसको डिजाइन र ग्राहकसँगको ‘डिल’ भने वर्षाले हेर्छिन्।
झट्ट सुन्दै धागोले बनाएको चुरा भन्ने बुझियोस् भन्ने सोचमा आफ्नो व्यवसायको नाम ‘धागोको चुरा’ राखेको वर्षाले खुलाइन्, ‘गाह्रो नाम राख्दा सम्झिन मुश्किल हुन्छ। धागोको चुरा भन्दा सुन्दै याद हुने र नेपाली नाम पनि हुने।’
आमा सुशीला र बुवा विमेशसँग वर्षा।धागोको चुराको माग प्रायः विवाह र चाडपर्वमा बढी हुन्छ। विवाहमा दुलहीको नाम लेखेका चुरा र अन्य विशेष पर्वमा रंगीन धागोले बनाइएको चुराको माग बढी हुने वर्षाले बताइन्। उनीहरू काँचको चुरामा रेशमको धागो प्रयोग गर्छन्।
काँचको चुरा प्रयोग गर्नेबारे उनी भन्छिन् हाम्रो लक्षित ग्राहक विवाहित महिला हुनुहुन्छ। विवाहित महिलामध्ये धेरैले काँचको रूचाउनु हुन्छ। त्यसैले काँचकैमा बढी ध्यान दिएका हौं।
धागोको चुरा बनाउन चाहिने सामग्री (चुरा, धागो र गम) उनीहरू भारतबाट आयात गर्छन्। एकमुस्ट सामान किन्दा सस्तो हुने भएकाले उताबाट मगाउने वर्षाले बताइन्
चर्चित टिकटकर सुधिर श्रेष्ठलाई आफ्नै दाई बताउने यी युवतीले ठगिन लाखौं रुपैया !
श्रीमानले सौता ल्याएपछि भक्कानिएर रोएकी आमालाई साना छोराले आँशु पुछ्दै फकाएको निकै मार्मीक दृष्य !
विराटनगरको काली मन्दिर अगाडि १० रुपैयाँमै भरपेट खाना !
रोशनीले नबताएको कथा : महरा प्रकरण
क्रिशमशका लागि सजाइएको रुखमा सर्पले बेरेपछि !
नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत अत्याधिक रक्तस्राव भएको सुत्केरीको उद्धार !
फ्रान्सेली भाले जसले बासेकै कारण अदालतमा मुद्दा खेप्नुपर्‍याे !
मुख्यमन्त्री कार्यालयको गाडीले टेम्पोलाई दियो ठक्कर, चालकको तत्काल मृत्यु !
भागेका सम्झनाका हत्या आरोपी राजेन्द्र समातिए !
श्रीमान आउन एक हप्ता अगाडि नै श्रीमती २० लाख लिएर फरार,छोरी रुदै आइन् मिडियामा !